I-Coastguard Cottage Retreat e-Lincolnshire Coast - I-Airbnb
I-Coastguard Cottage Retreat e-Lincolnshire Coast
Saltfleet, England, i-United Kingdom
U-Louise Ungumbungazi ovelele
No. 3 Indlwana Egulayo Ilala abantu abadala abangu-2 embhedeni olala abantu ababili ngokukhetha umbhede owodwa noma owengeziwe okhiphayo egumbini lokuhlangana lezivakashi/izingane ezengeziwe uma kucelwa. Iyithala eliphakathi nendawo, indlwana enhle kakhulu edolobhaneni lase-Saltforage, ebheke i-Haven Bank eholela oLwandle. Indlwana isanda kuvuselelwa ezingeni eliphakeme ngomlilo ovulekile, ingadi enotshani eya egcekeni elingaphambili nelivaliwe ngemuva. Ilungele ikhefu lezithandani nezinja zakho.
Izindlwana Zasogwini zigcwele ubuhle nobuntu, ziguqulwe ngothando ukuze zinikeze ukunethezeka nokukhululeka yi-Lincolnshire Coast. Ilungele abantu abashadile ukuba bahambe (ne-pooch yakho.) Dlulela emgwaqweni futhi uhambe ngqo emzileni wasolwandle ukukhipha uye olwandle. Kuwukuhambahamba okuhle, eceleni lapho izikebhe ziboshwe khona futhi ngokuvamile kuthatha imizuzu engu-15-20 ukufinyelela ebhishi. Ukutshuza kuvame ukuba kude kakhulu e-Saltfreon kodwa kuwuhambo oluhle lokuya olwandle, futhi nakuba kungathatha isikhathi, kuyafaneleka ngokuphelele (qiniseka ukuthi uhlola amatafula esikhathi sokutshuza.) Hamba ngakolunye uhlangothi futhi uzofinyelela i-Nature Reserve phakathi nemayela. Ingadi yegceke elingemuva ivikeleke ngokuphelele ukuze uqiniseke ukuthi izinja zakho zizophepha, noma uchithe ubusuku ngaphandle ujabulela ukudla futhi ubukele ushizi uphezulu. Indlwana ingenye yezindlu ezine ezigandayiwe ngakho omakhelwane basondelene, kodwa ziyiqoqo elinobungane ngakho lokhu akufanele kuthinte ukuhlala kwakho.
Le ndlwana ethokomele inekhishi elinawo wonke amasevisi ozowadinga, indawo yokugcina izimpahla, indawo yokuphumula enkulu enosofa abavulekile kanye ne-TV, iveranda (indawo ekahle yokugcina amabhuzu akho anodaka), indlu yokugezela enobhavu neshawa (ngaphezulu kwegumbi lokugeza), ikamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili kanye negumbi elengeziwe egunjini lokulala elingasetshenziswa njengekamelo lokulala elengeziwe.
Indlwana inezitebhisi ezinyukayo nezincane ngakho sicela ukugcine lokhu engqondweni ngaphambi kokubhukha uma lokhu kungaba inkinga kuwe. Siphinde sathola umbiko wokuthi ubhavu ungakujabulela ukungena njengoba kuyisilayidi esine-slipper eneshawa, ngakho-ke sicela ukugcine lokhu engqondweni uma unezinkinga zokuhamba.
Njengoba indlwana inendawo elinganiselwe, singatusa inja emibili encane noma eyodwa enkulu eziphatha kahle. Uma ungaqiniseki, sithumele umyalezo futhi sizoxoxa ngenjabulo.
I-Saltfreon iyidolobhana elithandwayo unyaka wonke. Idolobhana ngokwalo libungaza ama-pub angu-2, isiteshi se-petrol esinamathilomu amancane nesitolo esisesayithini. Konke lokhu kusebangeni lokuhanjwa ngezinyawo.
Emzaneni olandelayo wase-North Somercotes uzothola i-Co-op encane, isitolo se-Spaar, i-Chinese Take away ne-Italian Restaurant kanye namaphabhu angu-2 engeziwe. Shayela ibanga elide futhi ungafinyelela edolobheni elingokomlando lemakethe lase-Louth phakathi nemizuzu engu-20. Ama-resort aseceleni kolwandle anjenge-Mablethorpe angaphansi kwemizuzu engu-15 uhamba ngemoto ne-Skegness yimizuzu engu-50 kuphela ne-Cleethorpes imizuzu engu-40 ukuya kude. Uma ufisa ukuthatha ingxenye enkudlwana yomlando yase-Lincolnshire, idolobha lase-Lincoln liqhele ngehora elilodwa lapho uzothola khona i-Lincoln Cathedral ne-Lincoln Castle.
Phakathi no-October unyaka ngamunye, i-Greyeal Colony ivela ebhishi lase-Donna Nook elingamakhilomitha angaba ngu-5. Amakhulukhulu ezilwane zasolwandle asogwini kuya ekuzalweni kwamacephe azo. Kuwukubona ngempela ukubuka nokukufanelekela ukuvakashelwa.